Ogaden News Agency (ONA) – CWXO ayaa ka badbaadiyay in loo boobo ciida Ogadenya sida Gambella
CWXO ayaa ka badbaadiyay in loo boobo ciida Ogadenya sida Gambella
Waxaa maalinba maalinta ka dambaysa soo ifbaxaya shirqoolkii lala magaanaa dalkeena iyo ujeedadii laga lahaa oo ilaa waqtigan xaadirka ah uu Ilaahay naga badbaadiyay isagaa mahadaa lehe ka dibna CWXO oo dhiigooda ku difaacay.Dadka qaar ayaa waxay la yaabanaayeen sababta ay kooxdii Ibraahim dheere iyadoo weli uusan qalalinba khadkii lagu saxiixay hishiis ku sheegii dhex maray iyaga iyo maamulka Itobiya ay durbadiiba ugu dalbadeen in looga meegaaro dhul beereed wabiyada iyo banka ay harooyinka ku daacaan.
Markaad arimo dhowr ah isku geegeeyso, waxaa kuu soo baxaya sawir guud oo si dhab ah kuugu muujinaya wixii lala maaganaa dhul beereedka Ogadenya. Itobiya waxaa ka jira dhul boob ay heshiis ku yihiin ururka Wyanaaha ee TPLF oo doonaya inay iibiyaan wixii u gadmi kara khariidada Itobiya, ka dibna ay gobolkoodii Tigree la tagaan waxay boobeen. Itobiyada dhabta ah waa dhul in ka badan 70% buuralay ah oon lahayn dhul fidsan. Sidaa darteed dhulka ay.
Sidaa dar teed dhulka ay hadda doonayaan Wayaanaha inay boobaan oy ka iibiyaan maalqabeeno ka yimid Asia gaar ahaan dalalka Hindiya iyo Sacuudi Caraabiya waa dhulka Gambeelaha oo badankii hadda ay iibiyeen sida aad ku aragi doonto filimka hoose iyo dhulka Ogadenya oo qorshaha ugu jira haddii ay u hirgasho heshiis ku sheega la doonayo in dhulkeena lagula wareego. Taasoo aanay weli ka quusanin kooxda Ibraahim dheere uu horsocdo qandaraasyadana ka wata maalqabeeno Sacuudi ah iyo kooxda joogta suuqa Islee ee Nairobi.
Waxaan marnaba la iloobi doonin siyaabihii uu sheikh Shakuul isugu dayay inuu u buunbuuniyo is-dhiibkii Ibraahim dheere isagoo socday ilaa Addisababa ka dibna la soo noqday waxaan soo arkay dhul barwaaqo ah oo dihin. Markii la weydiiyay ka waran xagga nabadana wuxuu ku jawaabay ; ” .. waxaan aad uga yaabay dhulka aan marayay ee min jigjiga ilaa Q/dahar ma arag wax ciidan Ethiopian ah.”
Ujeedada oo idil ee loo durbaan tumayay waxay ku koobantahay ereyadaa uu yidhi Sh. Shakuul, sababtoo ah waa ganacsade caalami ah oo garanaya maahmaahda maal-qabeenka ee ah –Hantiilaha waa Fulay (Capital is coward) – sidaa darteed wuxuu u baaqayay maalqabeenadii qandaraaska lala soo galay inay soo galaan waddanka oy qaataan dhul beereedka.
Sida uu ninkan saxafiga ah ka warinayo gobolka Gambeela, dadkii dalka lahaa waxaa lagu raray qoriga caaradii qaarkoodna waaba la dilay oo xataa gurayahooda iyagoon dabkii u shidnaa aan ka daminin dhariyadii u saarnaa ayaa la raray oo meelo la’isugu geeyay. Ninka u waramaya nidaamka Meles wuxuu leeyahay waxaan isugu gaynaynaa xarumo si loo siiyo biyo nadiif ah iyo koronto. Hasa ahaatee dadka uu wareysanyo saxafiga oo cabsi darteed loo qarinayo wajiyadooda waxay sheegayaan in xeryo lagu ururiyay oo kali ah. Waxay ka dhigan tahay arintan sida uu ku tilmaamayo wariyaha jariimad laga galay shacabkaa aan waxba iska cabin karin.
Waxaan mar labaad u mahadnaqaynaa CWXO oo dhigiisa ku difaacaya dhulka hooyo ee kooxdan iimaanku ka tagay ay doonayaan inay sida Gambella uga iibsadaan maal-qabeemnada Sacuudiga. Ilaahay baa mahadaa lh.